Tarihi Derbent Tren İstasyonu Ne Zaman Açılacak? | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliဘယ်အချိန်မှာ Derbent ရထားဘူတာဖွင့်မလဲ?
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ဇန်နဝါရီလတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဒီဂရီရထားဘူတာသည်မေလတွင်ဖွင့်လှစ်မည့်လများနှောင့်နှေးပြီးနောက်အောက်တိုဘာလကုန်တွင်ဖြစ်သည်။ ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးဆုံးခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါ။
Kocaeli ငြိမ်းချမ်းရေးဆုသတင်းစာOguzhan Aktas မှသတင်းများအရ Kartepe ရှိ Tarihi သမိုင်းဝင် Derbent မီးရထားဘူတာကိုမေလနှင့် 2-18 တို့အကြားပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖြင့်Köseköyနှင့် Pamukova အကြားဖြစ်ပွားနေသောအချက်ပြစီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်းပိတ်ထားခဲ့သည်။ မီးရထားအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနကမေလကုန်ပိုင်းတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်4သည်မီးရထားဘူတာတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ Derbent ခရိုင်အကြီးအကဲ Erdal Başကဘူတာရုံသည်အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်စတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလလယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပေမယ့်ဘူတာရုံကိုဖွင့်မလားဆိုတာတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။
STATION ကိုထံမှ 1800 မဟုတ်ပါ
ယခုနှစ်သမိုင်း xnumx'l ဘူတာရုံ်ထမ်းဆောင်စတင်ကတည်းက 1800 အလုပ်ခုနှစ်တွင်ကြောင့် YHT ပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဝတျမပွုနိုငျသညျ။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား (YHT) စီမံကိန်းပြီးစီး, ကွားကာလ၌ 2014 ရက်ပေါင်းအချက်ပြလေ့လာပြီးတိုးတက်စေရန်ဤအချိန်ကိုထပ် operating နောက်ဆုံးဘူတာပိတ်ထားပြီးနောက်ပေမယ့်မေတ္တာရပ်ခံနေ့စွဲအပေါ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ စာနယ်ဇင်းခေါင်းကိုထိန်းညှိ၏ဘာသာရပ်အပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြန့်ချိခြင်းနှင့် Erdal Derbent ဒေသခံများက၎င်းတို့၏နစ်နာချက်များကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်တွေကတော့ရွာတွေကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်ဟိုင်ဒါအာကာသည် TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံသည့်ရက်မှာအောက်တိုဘာသို့မဟုတ်နိုဝင်ဘာဖြစ်သည်။ အချက်ပြမှုပြတ်လပ်မှုကိုသာမန်အားဖြင့် 16 ရက်အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါကိုစပိန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်တယ်။ YHT နှင့်တိုက်မိနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဤလေ့လာမှုကိုသေချာပေါက်ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့သည်။ အခုငါတို့မကျေနပ်ချက်ကိုကုစားချင်တယ်။
Derbent ဘူတာရဲ့အဆုံးမှာအောက်တိုဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် 16 / 08 / 2019 ဇန်နဝါရီလတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်မေလတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ထားသောသမိုင်းဝင်ဒါဘ်ရထားဘူတာသည်အောက်တိုဘာလကုန်ပြီးနောက်လပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးခဲ့သည်။
Derbent မီးရထားဘူတာတဖန်ပိတ်ပွဲ 29 / 04 / 2019 အမြန်ရထားရထားစီမံကိန်းကြောင့် 2014 တွင်သုံးနှစ်ကြာပိတ်ထားခဲ့သောသမိုင်းဝင်ဒါဘ်ဘူတာသည်Köseköyနှင့် Pamukova အကြားအချက်ပြစီမံကိန်းကြောင့်ပြည်နယ်မီးရထားလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနကထပ်မံပိတ်သိမ်းလိုက်သည်။ လေ့လာရေးများ ...
ဇန်နဝါရီလ 31 Tuzla တောင်တက်စတင်များကဲ့သို့ပင်ရပ်တန့်ခံရဖို့ရထားများအတွက် Derbent 2012 27 / 01 / 2012 ဇန်နဝါရီလတွင်ရထားစီးနင်းမှုမကုန်မီ 31 သည် Derbent နှင့် Tuzla အကြားအမြန်ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုစတင်သည်။ Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်, 31 ဇန်နဝါရီလ Derbent-Tuzla tren
ဒီနှစ်မှာတော့ကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများ Derbent Aladdin နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာစီမံကိန်းအတွက်သိမ်းယူခံရဖို့ 02 / 03 / 2015 ဒီနှစ် Derbent Aladağနှင်းလျှောစီးစင်တာစီမံကိန်းတွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများ - Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Tahir Akyürek၊ Derbent Aladağနှင်းလျှောစီးစင်တာစီမံကိန်း၊ Spor ဖြစ်လာရန်အားထုတ်မှုများကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသော
လူမှုရည်ရွယ်ချက်အသုံးပြုသောခံရဖို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဝင်မီးရထားဘူတာ 06 / 04 / 2015 Tarihi Tren İstasyonu Kültür ve Sosyal Amaçlı Kullanılacak : Yunusemre Belediyesi tarafından TCDD'den kiralanan tarihi Horozköy Tren İstasyonu'nun çok yakın zamanda kültürel ve sosyal amaçlı olarak kullanılacağı bildirildi. Yunusemre Belediye…
ဒီနှစ်မှာတော့ကွန်ကရစ်ခြေလှမ်းများ Derbent Aladdin နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာစီမံကိန်းအတွက်သိမ်းယူခံရဖို့
အဲဒီမှာ Derbent ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာ Aladag နှင်းလျှောစီးMеrkez
Derbent နှင်းလျှောစီး Center က Aladag လာပြီဖြစ်ပါတယ်